Igumbi lokulala eli-1 leContemporary, iAshby, iiNdawo zokulala ezi-4 - I-Airbnb
Igumbi lokulala eli-1 leContemporary, iAshby, iiNdawo zokulala ezi-4
Ashby de la Zouch , Leicestershire, United Kingdom
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguZane
Le ndlu ikwintendelezo ethe cwaka kumgama nje ongeemitha ezimbalwa ukusuka kwisitalato iMarket, eyona ndlela iphambili yokuthenga kwidolophu yaseAshby-de-la-Zouch, ilitye elinqabileyo kwisithsaba saseLeicestershire.
Yawongwa ngembasa yoYilo lweAshby Civic Society ngo-2016, eli gumbi litofo-tofo lomgangatho wokuqala, lihonjiswe ngobumnandi, lifakwe ngokupheleleyo kwaye lixhotyiswe kumgangatho ophezulu kakhulu. Inqanaba elisezantsi-Iholo yokungena. Inqanaba loku-1-Ikhitshi elifakwe ngokupheleleyo kunye negumbi lokutyela, indawo evulekileyo yeplani evulekileyo eneebhedi ezimbini zesofa kunye nendlu yangasese eyahlukileyo. Inqanaba lesi-2 - Igumbi lokuhlambela elinebhafu / ishawa, isitya sokuhlambela kunye nendlu yangasese. Igumbi lokulala - ibhedi enkulu kunye netafile yokunxiba / idesika. Ngaphandle-Indawo yokupaka enye ngaphandle kwendlela.
4.98 · Izimvo eziyi-93
Umbindi wedolophu yaseAshby uxinene kwaye uyachuma, inevenkile emva kweevenkile zabarhwebi abazimeleyo, ukusuka kwimpahla ukuya kwihombo lezacholo ukuya kukutya neziselo, wonakele ukuba uzikhethele. Kukho iqaqobana lamatyathanga apha, kunye nokhetho olulungileyo lweevenkile zesisa ukuba uziva wonge.
Ubomi basebusuku bale dolophu buye babhengezwa njengobonwabisayo, bohlukeneyo, bukhuselekile kwaye buyonwabisa. Kukho iindawo zokutyela kunye nezinto ezithathwayo, iibhari kunye neeklabhu zasebusuku, ii-micropubs kunye neendawo zokusela zakudala.
Naphi na apho ujika khona e-Ashby kukho imbali kunye nenkcubeko. Amabhodlo e-Ashby Castle, adlale indima ebalulekileyo kwiMfazwe yamakhaya yamaNgesi, yayingasemva kwe-Ivanhoe kaSir Walter Scott kwaye ingasemva kwimisitho yokwenziwa kwakhona okuqhelekileyo kule mihla.
IBath Grounds yayikhe yayindawo yokhenketho lwempahla yokuqala kwaye isakufanele ukutyelelwa namhlanje ngelixa izakhiwo zethu ezenziwe ngamaplanga kunye neRegency zibubungqina bendlela echumileyo yedolophu ezisahlala kuyo kakhulu.
I-Ashby yintliziyo ebetha ihlathi leSizwe. Ngenxa yoko iindawo ezazisakuba ngamalahle ziyingqongileyo ngoku ziluhlaza kwaye ziluhlaza, zizele ziindawo zokulondoloza indalo kunye neendawo zokuhamba.
I have lived in Ashby with my family since 2002. Since moving here I have been fortunate to find very good friends and plenty of things to do in the town and surrounding National Forest. The joy of hosting is to be able to give people who have never visited the town before the opportunity to experience it for themselves.
I have lived in Ashby with my family since 2002. Since moving here I have been fortunate to find very good friends and plenty of things to do in the town and surrounding National…
Ifumaneka ngefowuni, itekisi okanye i-imeyile ngayo nayiphi na imibuzo kunye nakulo lonke ixesha lokuhlala kwakho.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Ashby de la Zouch